धन ल्याउछु भन्दै उडेका नेपालीहरु यसरी फर्किए श’व बनेर रातो काठको बा’कसमा — newsparda.com
धन ल्याउछु भन्दै उडेका नेपालीहरु यसरी फर्किए श’व बनेर रातो काठको बा’कसमा
आफ्ना इच्छा, चाहना वा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आफ्नो देश छाडेर रोजगारिका लागि अन्य मुलुक जानुलाई नै वैदेशिक रोजगारिका रुपमा लिइन्छ । नेपालमा औद्योगिक क्रियाकलाप अत्यन्तै कमजोर भएको र कृषिमा पनि समसामयिक आधुनिकीकरण गर्न नसक्नाले आयमा कमी हुँदा जीवन निर्वाह गर्न पनि कठिन परिरहेको छ ।
जसले गर्दा अहिले लाखौ नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भइरहेका छन् र रोजगारी गएका युवाहरु मध्ये दैनिक एक जना त काठको बा’कसमा फर्किने गरेका छन् ।
लोक गायक प्रकाश सपूतलेले भने जस्तै धन ल्याउछु भन्दै गएका थियौ,उडेर आकाशमा। कस्तो भइ गयौ,कस्तो भइ आयौ,काठको बा’कसमा। यो गीतलाई चरिथार्थ गर्दै सुन्दर सपनाहरु मनमा राखेर खाडी लगायत बिभिन्न देश पसेका नव जवान युवाहरु यसरी दैनिक काठको बा’कसमा फर्किनु पर्दा कस्को मन न’रोला र ?
यस्तै, कोरोना र अन्य विभिन्न कारणले खाडी लगायत मलेसियामा मृ’त्यु भएर रोकिएका ८७ वटा नेपाली कामदारको श’व नेपाली पठाईएको खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरुले जनाएका छन् । विदेशबाट नेपालीहरुको स्वदेश फिर्ती सँगै त्यहाँ रोकिएका श’व पनि नेपाल पठाईएको हो ।
यस्ता, बहराइनबाट ३ वटा श’व, ओमानबाट १ वटा श’व पनि नेपाल पुगिसकेको छन् । अझै बाँकी कतारमा ११ जनाको श’व’, साउदीमा ५९ श’व र मलेसियामा २३ श’व बाँकी रहेको त्यहिँ स्थित दूतावासहरुले जनाएका छन् । यस्तै यूएईमा १४ जनाको श’व, कुवेतमा ५ जनाको श’व र बहराइनमा १ जना श’व नेपाल पठाउन बाँकी रहेको छ ।
लण्डनमा नेपालीले बेच्न थाले कोदोको रक्सी, एक बोटलको मूल्य ४ हजारभन्दा बढी
सम्पुर्ण नेपालीहरु लाई भारतीय सेनामा भर्ना खुल्यो, यसरि दिनुहोस आबेदन
जाने होईन त माल्टा, तलब २ लाख ८२ हजारसम्म, सेवा शूल्क ३० हजार मात्रै…
जाने होईन त माल्टा, तलब २ लाख ८२ हजारसम्म, सेवा शूल्क ३० हजार मात्रै….
कतार, साउदी अरब, मलेसियामा काम गरी फर्किएका पुरुषहरु अब बाउ बन्न नसक्ने…!